Avy any amin’ny Tahiry: Vongany 7 amin’ny Soratra Feno Fahendrena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 13:55 GMT
Sary avy amin'i Kim, mpampiasa Flickr. CC BY-NC-ND 2.0
Manangona ireo fanao tsara indrindra amin'ny fanoratana sy fanaovana tatitra ato amin'ny Global Voices ny Torohevitra Isankerinandro Momba ny Fanoratana. Omen'ny mpanonta vaovao Lauren Finch ho anao ireo torohevitra ho an'ny volana Novambra.
Taorian'ny taona roa mahery nanomezana torohevitra isankerinandro tato amin'ny Global Voices, fotoana izao hitetezana ireo tahiry sy hijerena ny sasany tamin'ireo torohevitra nozaraintsika tamin'izany fotoana izany.
Noho izany, ndeha tonga dia hitsoraka ao anatin'ny embona miaraka amin'ireto tenin'olona fito manaraka ireto izay manome torohevitra mahitsy momba ny fanoratana sy fanaovana tatitra. Ankafizo!
“Eny rehetra eny ireo hevitra momba ny tantara raha toa ka zarinao mahita izany ny atidohanao.” -Bret Schulte
“Vakio, vakio, vakio. Vakio ny zava-drehetra.” -William Faulkner
“Tsara ny haingana fa tsaratsara kokoa ny mety.” -mpanonta lahatsoratra ao amin'ny New York Times, Margaret Sullivan
“Raha toa ka zava-dehibe izany, mendrika ny ho lazaina amin'ny fomba mazava sy mahitsy mba hahafahan'ny rehetra mahatakatra azy.” Meteza ho heno. Mitenena amin'ny fomba mahitsy. avy amin'i Dustin Wax
“Aza mieritreritra mihitsy fa izay mazava aminao dia mazava ho an'ny mpamakinao.”-Kerry Redshaw
“Afaka mampihomehy ny teny. Afaka mahafinaritra. Afaka mamiravira, manakorontana ary mandainga koa ny teny. Afaka mandresy lahatra ny teny ary afaka mandiso. Afaka mamilivily saina ary afaka manome aingam-panahy ny teny.”-Russell Chandler
“Mamono ireo mpamaky toy ny ampahan-trondro tsy masaka izay mipetraka ela loatra ao anatin'ny vata fampangatsiahana ny teny manorisory.”-Diane Dolinsky-Pickar